El Yunque View Treehouse - I-Airbnb
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguJulio
I-Yunque View Treehouse yeyona ndawo ikhethekileyo ye-Treehouse equkwe kwinqaku elingeMakhaya eBetters kunye neGardens Magazine. IneNqanaba eliPhakamileyo lokuHamba uMlambo umkhondo ogquma undwendwe lwayo kumava othando lwendalo njengaye nawuphi na omnye. Apha unokonwabela iintaka ezihlala zikho, imilambo kunye nemibono emnandi ehlala kweli hlathi lidumileyo lehlabathi. Hlala kwindlu yomthi unabo bonke ubutofotofo bokuba sekhaya lakho.
IYunque Treehouse yindlu yomthi enamabali amabini aqinisekisiweyo ukuba angakunika amava awodwa. Umgangatho ophantsi unekhitshi lawo, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela, zonke zinombono omangalisayo wehlathi lelizwe lasePuerto Rico. Kumgangatho ophezulu uya kufumana igumbi lokulala elipholileyo elinegumbi lokuhlambela eligcweleyo, indawo yokusebenza enedesika kunye neTV. Omabini amabali aneTranki enamasebe namagqabi/
4.96 out of 5 stars from 497 reviews
4.96 · Izimvo eziyi-497
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi497
Ababuki zindwendwe banikezela ngolunye ukhetho lokuzonwabisa kwiindwendwe zabo ezibandakanya i-Hiking Trail yasimahla ngaphakathi kweYunque Rainforest (iNqanaba eliPhezulu). Kwakhona indawo yokuphumla yangaphandle ngombono weNtlambo yoMlambo kunye neNtaba yeRainforest
Ababuki zindwendwe banikezela ngolunye ukhetho lokuzonwabisa kwiindwendwe zabo ezibandakanya i-Hiking Trail yasimahla ngaphakathi kweYunque Rainforest (iNqanaba eliPhezulu). Kwakho…